Agụmakwụkwọ ihe owuwu site na iji Revit - Geofumadas
Ndụmọdụ imebe a na-arụ maka ya na Buildinglọ Ozi Model nke ezubere iji dozie ụkpụrụ ya.
Buputa, chepụta ma dozie ihe owuwu gị na REVIT
Mepụta ndebiri nke aka gị
Mbupụ na mmemme ịgbakọ
Mepụta ma hazie atụmatụ
Mepụta ma nyochaa ibu na mmeghachi omume na ihe owuwu
Site na usoro nkuzi a, ị ga - amụta otu esi eji ngwa ọrụ ndị a ka usoro nke ịchebe ihe owuwu maka ụlọ dị ngwa, rụọ ọrụ karịa nke kachasị mma.
Revit sọftụwia bụ onye ndu ụwa n’ichepụta ihe eji eme ụlọ na iji BIM (Modeling Information Modeling), na-enye ohere ndị ọkachamara ọ bụghị naanị imepụta atụmatụ mana hazie usoro ihe owuwu niile gụnyere njiri mara. Emere Revit tinye ihe eji eme ya.
Mgbe ị kenyere ihe na ọrụ, ị nwere ike:
Na akpaghị aka wepụta atụmatụ ụlọ, elu, ngalaba na ihe ngosi ikpeazụ
Mee ihe ngbakọ ọnụ na igwe ojii
Mee mgbako dị elu na mmemme pụrụ iche dịka nyocha nke Robot Structural
Mepụta usoro na usoro nyocha
Ngwa ngwa, mepụta atụmatụ nkọwapụta nke ọma
Meziwanye arụmọrụ gị mgbe ị na-arụ ọrụ na ihe BIM
Mee usoro nhazi n'ụzọ dị irè karịa iji ngwaọrụ Revit maka nhazi usoro
Mepụta usoro ihe owuwu na Revit
Mepụta atụmatụ nke ihe owuwu ahụ n'ozuzu ọsọ ọsọ
Mepụta usoro nyocha nke ihe eji arụ ọrụ
Iji mezuo omume ọ dị mkpa ka etinye software ndị a na PC ma ọ bụ MAC gị: Revit 2015 ma ọ bụ karịa
Agụmakwụkwọ a bu n'uche ndị ọkachamara metụtara usoro nhazi chọrọ iji bulie arụmọrụ ha
Ndị injinia na-esonye na usoro nhazi usoro ikpeazụ nke usoro ihe owuwu a nwekwara ike irite uru na usoro a.
Ọ bụghị usoro mmụta usoro mmụta, mana ọ bụ ihe bara uru etu esi etinye ihe omuma ndị enwetara na mbụ na njikwa ya na ngwaọrụ ndị na-eme ka ọrụ ndị injinia na ndị ọzọ sonyere na ọrụ ahụ.
Previous Post«Previous Usoro ArcGIS 10 - site na ncha
Next Post Advanced ArcGIS Pro AgụmakwụkwọNext »
2 na -aza “nkuzi nkuzi ihe owuwu site na iji Revit”
Jeffren VALENZUELA kwuru, sị:
Ike, 2020 na